Umbhede ka-Queen othokomele ekhaya likanokusho
I-Westwood House iyikhaya lomndeni eliwubukhazikhazi elimemayo kanye nendawo engcwele enokuthula enezilwane zasendle ezinhlobonhlobo ezivakashelayo, ebekwe endaweni eyihektare embalwa enezihlahla ze-oki ezineminyaka engu-400+ ubudala ukwamukela ukufika kwakho. ILincoln Cathedral, Showground, University, County Hospital, Wickenby Airfield, Cadwell Park, RAF Scampton zonke zitholakala kalula. Izinto ezifakwayo, izici, ukunethezeka kwemibhede, ukugeza, ikhishi, indawo yokuphumula kanye nasekhaya konke kusezingeni eliphezulu futhi kulungele izinhlobonhlobo zezivakashi nabahambi bebhizinisi.
Leli gumbi lokulala elihle, elikhanyayo nelinomoya linefasitela elikhulu elibheke ingadi engemuva, i-antique oak flooring, indawo yekhabethe elisetshenziswa igumbi lokugezela elikhulu elinebhavu elikhulu elishonelwe kanye neshawa yamandla ehlukile. Umbhede ngokwawo unethezekile futhi usayizi wendlovukazi kanye nokulala okunethezeka okungeyona i-allergenic ngelineni lesiFulentshi. Amathawula kanokusho, okugeza abavakashi, iziliphu, ishampoo, i-conditioner, ukugeza umzimba, umuthi wokuxubha kanye nokugeza okuyibhamuza kunikezwa ukuze kube lula kuwe. Kukhona umabonakude ekameleni onabanye omabonakude ababili ozowasebenzisa. Wamukelekile ukusebenzisa umshini wokuwasha, isomisi kanye nezinsiza zoku-ayina. Ngicela ukubuza noma yini enye edingekayo ukuze uhlale kahle lapha ekhaya lami.
Wamukelekile ukusebenzisa indawo yokuphumula, indawo yokuphumula (enomabonakude), igumbi lelanga, igumbi lokudlela, ihhovisi/isifundo, ikhishi, indawo yokugcina izinto (ene-TV) kanye nengadi enendawo yokudlela enkulu ngaphansi kombhede ofulelwe ngotshani. Ungase uthole ngisho nesikhathi sokusebenzisa itafula lethenisi egalaji lezimoto eziyisithupha elivulekile....manje okuyigumbi lemidlalo.
Uma nihamba njengomndeni omkhulu noma iqembu labangane......akhona amanye amagumbi okulala amane atholakalayo ekhaya lami.
I-Wifi ingafinyelelwa endaweni yonke! x
I-Westwood House esemgwaqweni omkhulu i-Wragby Road A158, amamayela ayi-4 ncamashi ukusuka e-Lincoln Cathedral ebabazekayo, ibuyele emuva ezindaweni ezinamapulangwe ezinezihlahla ze-Oak ezivikelwe kanye nenqwaba yezilwane zasendle. I-A158 iholela ezindaweni ezisogwini zaseLincolnshire njengeSkegness noma amabhishi athule ukuze uhambe uhambo olude olunokuthula unqamule iLincolnshire Wolds enhle! I-Westwood House ibekwe ngendlela elula ukuthi iqonde edolobheni esikhathini esingaphansi kwemizuzu eyi-10 noma endaweni enokuthula yaseLincolnshire emaphandleni ngaphansi kwemizuzu eyi-15. Ngingakujabulela ukukunikeza imininingwane njengoba kudingeka! x
Ngizobe ngikhona ukuze ngisize uma kudingeka futhi ngakolunye uhlangothi locingo ngaso sonke isikhathi! x